Umzi mveliso we-40G Series | Kwichina 40G Series Abavelisi, abaxhasi
40Gb / s QSFP + 1310nm 2km DDM Duplex LC transceiver ebonakalayo
I-40Gb / s 2km QSFP + Transceiver yimodyuli ye-transceiver eyilelwe i-40GBASE-LR4, i-InfiniBand QDR kunye ne-DDR zonxibelelwano kunye nezicelo zonxibelelwano ze40G Telecom. Uyilo luyahambelana ne-40GBASE-LR4 ye-IEEE P802.3ba esemgangathweni kunye ne-QSFP yeMvumelwano yeMithombo emininzi (i-MSA) kunye ne-QDR / DDR ye-infiniband yedatha
I-40Gb / s QSFP + SR 850nm 100m DDM MTP / MPO i-transceiver ebonakalayo
Iimodyuli ze-QSFP + ze-transceiver ziyilelwe ukusetyenziswa kwi-40 Gigabit ngomzuzwana amakhonkco ngaphezulu kwe-multimode fiber efanayo, kubandakanya ukuphuma ukuya kwi-10 ye-Gigabit ngomzuzwana amakhonkco. Ziyathobelana ne-QSFP + MSA kunye ne-IEEE 802.3ba, 40GBASE-SR4 kunye ne-IEEE 802.3ba 10GBASE-SR. Imisebenzi yokuqonda isifo yedijithali iyafumaneka kusetyenziswa ujongano lwe-I2C, njengoko kuchaziwe yi-QSFP + MSA.
40Gb / s QSFP + LR 1310nm 10km DDM Duplex LC transceiver ebonakalayo
I-40Gb / s 10km QSFP + iTransceiver yimodyuli ye-transceiver eyilelwe i-10Km izicelo zonxibelelwano ezibonakalayo. Uyilo luyahambelana ne-40GBASE-LR4 ye-IEEE P802.3ba esemgangathweni kunye ne-QSFP ye-Multi-Source Agreement (MSA).